Olee otú naghachi faịlụ site USB Flash Drive on Mac
> Resource> Mac> Olee otú iji naghachi faịlụ site USB Flash mbanye ke Mac
USB flash draịva nwekwara na-akpọ pen draịva, isi draịva ma ọ bụ nanị USB draịva. A USB flash mbanye bụ a adaba obere nchekwa na ngwaọrụ na-enyere gị nyefee gị niile data site na otu kọmputa ọzọ nnọọ mfe. Ị nwere ike ikwunye ha n'ime ihe ọ bụla kọmputa nwere a USB n'ọdụ ụgbọ mmiri. N'ụzọ dị otú a, gị niile dị mkpa faịlụ na data nwere ike ịbụ na ị oge niile.
Otú ọ dị, e nwekwara ụfọdụ mberede mere ndị USB flash mbanye dị nnọọ ka na-kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-ahụ na gị USB flash mbanye na-emerụ, formatted ma ọ bụ faịlụ na-ehichapụ dị ka ndị na-esonụ ọnọdụ:
Mgbe azọpụta faịlụ site na kọmputa m mberede, ọ na-ekokwasị elu na-ekwu, "Ọ bụghị na-aza" ruo ogologo oge na mgbe na USB mbanye faịlụ-apụghị agụ dị ka efu ...
M ihe niile m na-arụ ọrụ na m flash mbanye na niile a na mberede kọmputa m na-agwa m na ọ bụ unreadable! Achọghị m ka m na-reformat na flash mbanye. M chọrọ iji naghachi m faịlụ. Bụ nke a kwe omume?
Atụla egwu! E nwere USB flash mbanye mgbake Mac omume dị inyere gị aka na-eweta gị USB flash mbanye dịghachi ndụ. Ebe a ka nwere a na-agbalị na Wondershare Data Recovery for Mac. Soro na-na-niile gị faịlụ azụ USB flash mbanye. Na mkpa a ole na ole nzọụkwụ.
Mgbe wụnye na-agba ọsọ usoro ihe omume gị na Mac, jikọọ gị USB flash mbanye na Mac, na mgbe ahụ họrọ "ehichapụ File Iweghachite" ịhụ azụ gị furu efu faịlụ.
Ebe i nwere ike ịhụ na gị USB flash mbanye achọpụtara site usoro ihe omume. Họrọ ya na kụrụ "iṅomi" na-amalite na-achọta furu efu faịlụ.
Mgbe scanning usoro dechara, niile faịlụ hụrụ azụ na-nkewa dị mbụ ụzọ na-ekpe ndepụta nke interface. Ọ bụrụ na ị na-achọghị iji naghachi ha niile, i nwere ike selectively na-azụ onye ị chọrọ site n'inyocha ya. Na ị na-ike ihuchalu ha n'ihu na-eme mgbake ma ọ bụrụ na faịlụ na ị na-aga na-agbake foto (na formats nke jpg, TIFF, PNG, BMP na GIF), PDF faịlụ, HTML (HTM) ma ọ bụ ZIP Archives. Họrọ faịlụ i chọrọ iji naghachi na iti Naghachi ịzọpụta ha na gị na Mac.
Cheta na: Ọ bụrụ na i nwere ike ịhụ gị chọrọ faịlụ site na nke a "ehichapụ File Iweghachite", i nwere ike na-agbalị "Raw Iweghachite", nke nwere ike inyere ike iṅomi miri nnọọ emi ka i nweta furu efu faịlụ ọzọ kpamkpam, na kwa ọ na-achọ ndị ọzọ oge maka scanning.
Video nkuzi nke Mac USB flash mbanye data mgbake
Esi Back faịlụ site Seagate mpụga ike mbanye
Download kasị mma Android emulator maka PC, Mac
Mac Obere Iweghachite: Olee naghachi Data si Mac Obere
iMac Draịvụ Iweghachite - Olee otú naghachi furu efu faịlụ site na Draịvụ on iMac
Mac Obere Draịvụ Iweghachite Tutorial
Otú nyefee Videos si iPod ka Mac
Olee otú Naghachi Mac Files mgbe Formatting Macintosh HD